SD oo weerar ku haysa cuntada xalaasha ee laga bixiyo iskuulada Malmö | Somaliska
Ururka cunsuriga a ee Sverigedemokraterna (SD) ayaa diyaariyay mooshin ka dhan cuntada xalaasha ee la siiyo ardada iskuulada magaalada Malmö. Mooshinka oo loo soo bandhigayo maamulka Kamuunka Malmö ayay SD ku doonayaan in meesha laga saaro fursada loo siiyo ardada in ay doortaan cuntada xalaasha.
Sharciga u yaala Malmö ayaa hada dhigaya in ardada aan sabab “caafimaad, diimeed iyo sabab kale” aan u cuni karin cuntada caadiga ah loo sameeyo cunto ay cuni karaan. SD ayaa doonaysa in meesha laga saaro erayga “diimeed” iyaga oo ku doodaya in qaabka Muslimiintu ay xoolaha u qalaan aysan wanaagsanayn. Maamulka Kamuunka ayaa sheegay in aysan ku talo jirin in ay isbedal ku sameeyaan cuntada iskuulada.
Arinta cuntada xalaasha ee iskuulada ayaa dood badan ka dhalisay qeybo ka mid ha Sweden, iyadoo sanadkii hore magaalada Svedala laga joojiyay cuntada xalaasha. Ka dib arintaas ayaa Hay’ada la socodka iskuulada (Skolinspektionen) ay soo jeedisay in aysan qaabka loo qalay xayawaanka aysan waxba ka quseyn waxbarashada iskuulada.
SD ayaa shaqo ka dhigatay in ay dabagal iyo cadaadis saaraan dhamaan waxyaabaha la xiriira Muslimiinta iyo Islaamka, iyaga oo siyaasadooda ay qeyb weyn ka tahay dagaalka ay kula jiraan Islaamka.
Växjö: Soo galooti dambe qaadan mayno